Xildhibaanno: Kenya waa inay raali galin bixisaa.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa dalbaday mooshin lagu dalbanayo in Kenya raali galin ka bixiso qab-qabashadii Somalida ee Nairobi
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Somalia oo shir jaraaid ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay inay baarlamaanka u gudbiyeen mooshin ka dhan ah Kenya oo ku saabsan qab-qabashadii dhawaan ciidanka dalkaasi ay qabteen dad fara badan oo Somali ah oo ay ku jiraan xildhibaanno ka tirsan barlamaanka Somalia.
Prof. C/laahi Axmed Afrax oo ka tirsan mudanayaasha mooshinkan gudbiyay ayaa VOA-da uga warramaya qodobadda mooshinka ku qoran oo uu sheegay inay 8 qodob ka kooban yihiin.
Prof. C/laahi, wuxuu sheegay inay sharci daro tahay raafkii dhawaan ka dhacay Nairobi oo uu sheegay in si gaar ah loo bartilmaameedsaday dadka Somalida ee degan Kenya. Prof. C/llaahi wuxuu sheegay in Kenya ay degan yihiin Soomaali badan oo qaarkood ganacsi iyo maalgashi badan ka sameeya dalkaasi.
Xildhibaankan Prof. C/laahi Afrax, wuxuu sheegay in mooshinka ay ku xuseen haddii Kenya aysan raali galin ka bixin qab-qabashadaasi in la raro oo laga wareejiyo Kenya xarumaha hay'addaha Qaramada Midoobay iyo safaaradaha Shisheeye ee Somalia qaabilsan. Mudanayaashan waxay ku dooddeen in Kenya ay faaido ka hesho xarumahaasi oo 20-kii sano ee ugu danbeeyay ka howlgalay magaalada Nairobi.
Wareysiga Xildhibaan Prof. C/laahi AxmedAfrax qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso.
Wareysiga Prof. C/laahi Afrax